"12 Ary Petera, nony nahita, dia namaly ny vahoaka hoe: Ry lehilahy Isiraely, nahoana no talanjona amin’izany hianareo? Ary nahoana no mandinika anay hianareo, toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa-mandeha? 13 Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an’i Jesosy Mpanompony, Izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan’i Pilato, rehefa nokasainy halefa. 14 Fa hianareo nandà Ilay Masina sy Marina, ary mpamono olona no nangatahinareo halefa ho anareo; 15 fa ny Tompon’ny aina kosa no novonoinareo; fa Izy natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty, ary vavolombelon’izany izahay. 16 Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany; eny, ny finoana izay azo amin’ny alalany no nahazoany izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. 17 Ary ankehitriny, ry rahalahy, fantatro fa tamin’ny tsi-fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. 18 Fa izany no nahatanterahan’Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra rahateo, fa hiaretan’ny Kristiny. 19 Koa mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin’ny fanatrehan’ny Tompo, 20 ary mba hanirahany ny Kristy voatendry ho anareo, dia Jesosy, 21 Ilay tsy maintsy horaisin’ny lanitra mandra-pihavin’ny andro fampodiana ny zavatra rehetra, izay nampilazain’Andriamanitra ny mpaminaniny masina hatramin’ny voalohany indrindra. 22 Fa Mosesy nilaza hoe: Mpaminany no hatsangan’i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin’ny rahalahinareo, tahaka ahy; izy no hohenoinareo amin’izay rehetra holazainy aminareo. 23 Ary izay rehetra tsy hihaino izany mpaminany izany dia haringana tsy ho eo amin’ny olona. 24 Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin’i Samoela sy izay nanarakaraka, na iza na iza niteny, dia nanambara izao andro izao. 25 Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny razanareo, raha hoy Izy tamin’i Abrahama: Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. 26 Andriamanitra, rehefa nanangana ny Mpanompony, dia naniraka Azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin’ny fialanareo rehetra amin’ny faharatsianareo isam-batan’olona." Asan'ny Apostoly 3:12-26
Mampitodika ny olona ho any amin’i Kristy (14-16). Ny tanjon’ny fahagagana dia tsy ny hampalaza ny mpanompo izay nampiasain’Andriamanitra hahatanteraka izany fa ny hanasitrana ilay olona aloha ary ny hitondra ny hafa koa ho amin’ny finoana an’i Jesosy sy ny fahefan’ny Anarany. Indraindray mantsy dia ny olona indray no tena mahazo voninahitra fa tsy Andriamanitra. Soli Deo Gloria!
Izy Ilay nampanantenain’ny mpaminany. Tsy maintsy nampifandraisina amin’ny finoana izay mafy orina teo amin’ny mpihaino ny fitoriana nataon’i Petera. Iza avy no ilazàn’i Petera an’i Jesosy eto?
Mampibebaka (19, 23b). Dingana tsy azo ialàna io ho an’izay hiverina amin’Andriamanitra. Misy tokoa mantsy manatona an’Andriamanitra saingy tsy mahafoy fa dia mivingitra eny ihany ny toe-po ratsiny, ny fomba sy fanao ratsiny taloha ka tsy manaiky hafahan’i Jesosy. Raha miteny i Paoly hoe esory izao rehetra izao… (Kolosianina 3:8) dia avy eo vao hoe mitafia (Kolosianina 3:12) dia betsaka no mitafy ambony tsikoko eny ihany. Toa hoe mpivavaka fa tsy manana fiainam-baovao. Tsy maintsy mandalo ny fibebahana ny fandraisana ny fiainam-baovao. Teny mampangidihidy sofina ny maro io mihitsy io hoe: mibebaka io!